Amajjii tokko Bara haareya 2021 Guyyaa WBO fi Eebbaa leenjitoota WBO zoonii kibbaa – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAmajjii tokko Bara haareya 2021 Guyyaa WBO fi Eebbaa leenjitoota WBO zoonii kibbaa
Amajjii tokko Bara haareya 2021 Guyyaa WBO fi Eebbaa leenjitoota WBO zoonii kibbaa
Viva WBO bagattigeessan
Goonni mana Farsoo
WBO koo Leencakoo
Har’aan geessee qabsoo
Hin raftu galgala
Hin qabdu Firaashii
Guyyichii guyyaa addati. Akka gariiti jala bultii ayyeenefachaa jirra kana hafee ammoo bor nu egaa.
Eebba leenjitoota jajjabee zoonii kibbaa!
“Hojii guddaa dinqisiisaa waan hojjeteef, faarfannaa haaraadhaan Waaqayyoon faarfadhaa! Harki isaa inni mirgaa, irreen isaa inni qulqulluunis, mo’icha isa argachiisaniiru.” Far 98:1
Waaqayyo keenya, isa jabaa fi dadhabaa, isaa mamuu fi sodaatuu, guddaa fi xiqqoo utuu hin jedhin hunda keenya 2021tti ceesiseera. Galanni guddaan isaaf haa ta’u!! Waggaa haaraan kun, waggaa mo’ichaa fi waggaa mirgaan galu nuuf haa ta’u! Ameen!
Abditu Jiraa Duurako
“Faranjii Fii Warri Abbaa Sange baga bara 2021 ittiin isin Gehe!. Oromoon dhimma keeysani!.”
From Taqlaayi Minister of Ethiopia.
Baga guyyaa waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) Amajjii 1/2021 geettan!!
Amajjiin 1 guyyaa waraanaa Bilisummaa Oromoo ta’ee ganna gannaan kabajama. Ummannii Oromoo akka gaafa Ibiddi gabrummaa daggala bilisummaa isaatti qabatee kaasee, sirna gita bitootaaf guyyaa tokkoo miti sakandiifillee oggolee hin beeku.
Bilisummaa fi birmadummaa isaa kan weerartootaa kaabaatiin harkaa mulqame deebisee waaroo bilisummaa isaa dachii isaa Oromiyaatti uffisuuf wareegama qaalii kafalaa har’a gahe. Wareegama kafalamaa ture keessatti sochiin waraanni bilisummaa Oromoo bakka bakkaatti taasisee fi injifannoon argame, dhaloota haaraa xurree Oromummaa irratti akka guddatan godhee jira.
injifannoowwan diina Oromoo irratti qabsoo hidhannootiin argaman walitti qabamuun Amajjiin 1 waggaa waggaan guyyaa waraana Bilisummaa Oromoo ta’ee ayyaaneefatama. Guyyaa waraanaa Bilisummaa Oromoo bara 2021 kana ummanni Oromoo bakka garagaraatti kabajaa jira. Yeroo kabaju ammoo sigigaata qabsoo Oromoo yaadataa, aarsaa guddaa bara 2020 keessa kafallee xiinxallaa kabajata.
Erga jijjiramni dhufee, ABO qabsoo karaa nagayaatti deebi’ee waraanni Bilisummaa Oromoo gaafiin ummata Oromoo Itoophiyaa keessaan deebi’uu hin danda’u jechuun qabsoo hidhannoo filatee mootummaa Itoophiyaa wajiin wal waraanaa jira. Duulli sakatta’insa Waraanaa Bilisummaa Oromoos lixaa fi kibbaa Oromiyaatti banamuun, harkaa mootummaa Biltsiginnaatti lubbuu qaaliin ummataa badaa turtee jirti. Ammas badaa jirti.
Ta’us waraanni Bilisummaa Oromoo ejjaannoo isaa kan gaafiin ummata Oromoo Impaayera Itoophiyaa keessaan deebi’uu hin danda’u jedhutti cichuun mootummaa gabroomsa kana kufee kuffisaa jira. Bilisummaa barbaadamu, kuffisanii kufuun dhufa waan ta’eefi.
Guyyaan waraanaa Bilisummaa Oromoo Amajii 1 bifa garagaraatiin kabajamaa jiraatus bifa waytaawaa fi guutuu ummata Oromoo hirmaachiseen akka kabajamu godhuuf barri isaa fagoo miti. Jechuun kiyya mooraa qabsoo keessatti qofa kabajuu irraa gara waytawaan kabajuutti ni ceena.
#Halkaan kana #Ijoolleen Abbaa #Caalii #golaale_Oromiyaa hunda keessatti Tarkaanfi ni fudhaatu”!
#INJIFAANNOON waliitti Dachaana!
Jechoota Oromoo!Yoo ol adeemuu dadhaban gadi fiiguu dadhabuuree!!
Arba Argaa Foon Hin Qorannu!